> Resource > Talooyin > Fikradaha Farriin Wedding - bishaaree Your Guurka ee Sidaada
Ogeysiisyada Wedding ma aha had iyo jeer waajib ah, laakiin ay jiraan sababo dhowr sababta aan. Marka aad xaas tahay, wax badan ka bedelay, oo ay ku jiraan magacaaga bulshada, qoyskaaga iyo cinwaanka gurigaaga, waxaa laga yaabaa. Gaar ahaan marka waalidiinta aad marti arooska laakiin waa inaad badan oo la dheereeyey qoysaska, iyo asxaabtii aan la marti qaaday, ama aad leedahay arooska oo saaxiib, waa mid aad u baahan yahay si loo dhawaaqo arooska rasmi ah. Haddii guests hadiyado aroos aad u soo diray, sidoo kale diri ah mahadnaqid ah inaad ogaataa in ay muujiyaan inaad ku Mahdisaan.
Halkan waxaa ku qoran fikrado arooska dhawaaqay in aad u sheegto guurka dunida.
Ogeysiisyada Wedding on Newspaper
Helitaanka lagu dhawaaqayo arooska on wargeyska waa wax dhaqanka iyo rasmi ah. Waxa uu leeyahay waxba kuma samayn Xoolo ama warkiisiina. Waxaa si gaar ah muhiim u ah dadka ku nool magaalooyinka kala duwan ka badan waalidkood - Ku dadaal diri lagu dhawaaqayo arooska inay ku samee sidoo kale ay wargeysyada maxalliga ah. Qaar ka mid ah wargeysyada xataa siiyaan meel free ogeysiisyada arooska, wac xafiiska xog iyo wixii tafaasiil si ay u soo gudbiyaan. Labada qofood ee doonaya in ay ku dhejin ogaysiiska arooska on wargeyska kuwaas (lacag loo baahan yahay). Wixii bixisay arooska wargeyska lagu dhawaaqayo, fadlan la xiriir miiska dhawaaqay wargeyska maxali ah.
2. Chicago Tribune, (312) 222-4049; oo keliya dadka ku nool ama ka shaqeeya aagga Chicago ka.
Ogeysiisyada Wedding Photo
Waxaa jirta waddo toos ah wax ka badan diraya ah kaarka sawirka arooska dhawaaqay in dad gaar ah, oo idinku innaba ma aydaan arooska loogu yeedhay, laakiin aad rabto in aad ogaato waxaad u xidhan gunti. Iyadoo sawirada arooska, oo waxay ogaan doonaan faahfaahinta xafladda, marka lagu daro magacyada waalidka, taariikhda iyo goobta arooska, cinwaanka cusub guriga iyo wixii la mid ah. Tan ugu muhiimsan waa in ay la wadaagi karaan Farxadda arooska.
Ogeysiisyada Wedding on Website
Website A arooska sidoo kale waa meel wanaagsan in uu ku dhawaaqo guurkaaga. Hubi in website arooska cinwaanka ayaa waxaad kor saartaa badbaadin kaarka kaarka taariikhda ama arooska martiqaadka, si ay dadku u soo booqan doona si aad u hesho wararka arooska online. Sidaas dhawaaqay arooska cagaaran ku haboon yahay internet dadka ugu xeel dheer. Haddii ay sidaas tahay, Facebook ayaa sidoo kale website kaamil ah inaad saaxiibadaa ku dhawaaqi kara guurka. Waxaa laga yaabaa inaad xiiseyneysa inay u soo jiidasho online sawir arooska dhawaaqay .
Goorta iyo sida ay u diri lagu dhawaaqayo arooska
Qaar ka mid ah khubarada arooska soo jeedinaynaa in aan diraya lagu dhawaaqayo arooska ka hor arooska. Laakiin waxay ku xiran tahay. Haddii aad kaliya ku dhawaaqay arooska, waa OK. In arooska rasmi ah, waxaad ku soo wax yar ka hor soo dhaweynta arooska. Marka qofka qaataha ah wuxuu qaadan, kaliya aad u wada guursadeen. Habkan, oo dadka aad u hesho warka marka ay weli warka, gaar ahaan kuwa ku nool fog. Si aad u soo diro kaarka dhawaaqay arooska, aad xajka aad hooyaday, gabadh sharaf, ama nin ugu fiican si ay u soo da'a ee boostada.